सर्वोच्चले जे भन्छ, त्यही गरौंला भन्नु कसरी बेठिक हो? : रमेश लेखक [अन्तर्वार्ता] वैशाखमा चुनाव भयो भने भदौमा महाधिशेन हुने जस्ता कुरा नितान्त काल्पनिक कुरा हुन्। त्यसैले कल्पनामा छलफल गर्नुहुन्छ। किनभने, नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ। निर्वाचन भए पनि महाधिवेशन गर्छ, नभए पनि गर्छ। कांग्रेसको महाधिवेशन छ भनेर ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो र? निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको हो र? बिहीबार, माघ २२, २०७७
किन तोकिएन कांग्रेस महाधिवेशनको नयाँ मिति? कार्तिक २८ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा नयाँ कार्यतालिकाका सन्दर्भमा छलफल भएपनि निर्णय भने गरिएन। पौडेल नयाँ कार्यतालिका सार्वजनि... बिहीबार, मंसिर ४, २०७७
'ग्लोबल टाइम्स'ले भारतीय पार्टी भनेपछि कांग्रेसको आपत्ति कांग्रेस पार्टी चीन सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध राख्दै आएको र उच्च महत्व दिएको तर राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय अखण्डताप्रति समर्पित भए... शुक्रबार, कात्तिक २८, २०७७
सभामुखले प्रक्रिया अघि बढाउँदा कांग्रेसले 'रणमैदान' बनायो प्रदेशसभा कानुनमन्त्रीले आफ्नो कुरा राखेपछि सभामुखले प्रदेश सभाको नाम र राजधानीको प्रस्तावबारे छलफल समाप्त भएको घोषणा गर्दै अर्को बैठक मंगलबार... सोमबार, असोज १९, २०७७
मुकेश काफ्ले कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभागको सदस्यमा मनोनित देउवा पक्षीय काफ्लेलाई शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभागको सदस्यमा मनोनयन गरिएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपम... शुक्रबार, भदौ १९, २०७७
भारतीय बाँधले नेपालमा भएकाे क्षति जानकारी गराउन कांग्रेसद्वारा सार्वजनिक महत्त्वकाे प्रस्ताव दर्ता नेपाली कांग्रेसले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको भू-भागमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताविपरीत बाँध, तटबन्ध र सडक निर्माण गरेको विषयम... सोमबार, असार १५, २०७७
सय जना कामदार नपठाए म्यानपावर खारेज हुने व्यवस्थाप्रति कांग्रेसको आपत्ति सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावर खारेज हुने व... सोमबार, असार १, २०७७